Kubhabhatidzwa Kuita Sei?
SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bété Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiChangana (Zimbabwe) ChiKaren (S'gaw) ChiPhimbi ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Futuna (East) Ga Galician German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Havu Haya Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kachin Kalenjin Kamba Kannada Kanyok Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Khana Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Laotian Lari Lega Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Shirima Makonde Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Mari Mashi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuIvory Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNepal Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuVietnam Mutauro Wemasaini wokuZambia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Lovari, Hungary) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sepulana Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndinofanira Kuzvitsaurira Kuna Mwari Ndobhabhatidzwa Here?
1. Nekudzidza kwawaita bhuku rino, mubvunzo upi waungazvibvunza?
UNE dzidziso dzemuBhaibheri dzakawanda dzawakadzidza mubhuku rino, dzakadai sevimbiso yaMwari yekurarama nekusingaperi, mamiriro ezvinhu evakafa, uye tariro yekuti vakafa vachamuka. (Muparidzi 9:5; Ruka 23:43; Johani 5:28, 29; Zvakazarurwa 21:3, 4) Pamwe wakatotanga kupinda misangano yeZvapupu zvaJehovha uye unobvuma kuti kunamata kwavo ndikwo kwechokwadi. (Johani 13:35) Pamwe wakatotanga kuva neushamwari hwakasimba naJehovha, uye ungava wakatosarudza kuti wava kuda kumushumira. Saka unogona kuzvibvunza kuti, ‘Ndingaita sei iye zvino kuti ndishumire Mwari?’
2. Chii chakaita kuti murume wekuItiopiya ade kubhabhatidzwa?
2 Ndizvo zvakabvunzwawo nemurume wekuItiopiya akararama makore akatanga chiKristu. Pati pfuurei nguva Jesu amutswa, murume uyu akaparidzirwa nemumwe mudzidzi waJesu ainzi Firipi. Firipi akamujekesera kuti Jesu ndiye aiva Mesiya. Murume uyu wekuItiopiya akabayiwa mwoyo nezvaakadzidza zvekuti akabva angoti: “Onai pano pane mvura! Chii chinganditadzisa kubhabhatidzwa?”—Mabasa 8:26-36.
3. (a) Jesu akapa vateveri vake murayiro wekutii? (b) Munhu anofanira kubhabhatidzwa sei?
3 Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti kana uchida kushumira Jehovha, unofanira kubhabhatidzwa. Jesu akaudza vateveri vake kuti: “Endai munoita kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi, muchivabhabhatidza.” (Mateu 28:19) Jesu akatiratidza nzira yekuti titevere pakuti iye pachake akabhabhatidzwawo. Akanyudzwa muviri wese mumvura, kwete kungomwayiwa mvura mumusoro. (Mateu 3:16) Mazuva ano kana muKristu achibhabhatidzwa, anofanirawo kunyudzwa muviri wese mumvura.
4. Paunobhabhatidzwa unenge uchiratidza vamwe chii?
4 Paunobhabhatidzwa, unenge uchiratidza vamwe vese kuti unoda zvechokwadi kuva shamwari yaMwari uye kumushumira. (Pisarema 40:7, 8) Saka unogona kuzvibvunza kuti, ‘Ndinofanira kuitei kuti ndibhabhatidzwe?’
RUZIVO UYE KUTENDA
5. (a) Unofanira kuitei usati wabhabhatidzwa? (b) Nei misangano yechiKristu ichikosha?
5 Usati wabhabhatidzwa, unofanira kusvika pakuziva Jehovha naJesu. Wakatotanga kuita izvi nekudzidza kwauri kuita Bhaibheri. (Verenga Johani 17:3.) Asi izvozvo hazvina kukwana. Bhaibheri rinoti unofanira kuzadzwa “neruzivo rwakarurama” nezvekuda kwaJehovha. (VaKorose 1:9) Misangano yeZvapupu zvaJehovha ichakubatsira kuti uwedzere kusimbisa ushamwari hwako naJehovha. Ichi chimwe chezvikonzero zvinokosha chekuti ugare uchipinda misangano iyoyo.—VaHebheru 10:24, 25.
Usati wabhabhatidzwa, unofanira kudzidza Bhaibheri
6. Unofanira kuziva zvinhu zvakawanda sei zviri muBhaibheri usati wabhabhatidzwa?
6 Hazvirevi kuti Jehovha ari kukutarisira kuti uzive zvese zviri muBhaibheri usati wabhabhatidzwa. Aisatarisira kuti murume wekuItiopiya azive zvese asati abhabhatidzwa. (Mabasa 8:30, 31) Uye ticharamba tichidzidza nezvaMwari nekusingaperi. (Muparidzi 3:11) Asi usati wabhabhatidzwa, pane dzidziso dzemuBhaibheri dzaunofanira kutanga waziva uye kubvuma.—VaHebheru 5:12.
7. Kudzidza kwawaita Bhaibheri kwakubatsira sei?
7 Bhaibheri rinoti: “Pasina kutenda hazviiti kunyatsofadza Mwari.” (VaHebheru 11:6) Saka unofanira kuva nekutenda usati wabhabhatidzwa. Bhaibheri rinotiudza kuti vamwe vanhu vekuKorinde vakanzwa zvaidzidziswa nevateveri vaJesu uye “vakatanga kutenda, vakabhabhatidzwa.” (Mabasa 18:8) Iwewo kudzidza kwawaita Bhaibheri kwakubatsira kuti uve nekutenda muzvinhu zvakavimbiswa naMwari uye simba rechibayiro chaJesu, icho chinogona kutiponesa pachivi nerufu.—Joshua 23:14; Mabasa 4:12; 2 Timoti 3:16, 17.
UDZA VAMWE CHOKWADI CHEBHAIBHERI
8. Chii chichaita kuti uve nechido chekuudza vamwe zvawakadzidza?
8 Pauri kudzidza Bhaibheri, uchiona kubatsira kwariri kukuita muupenyu hwako, kutenda kwako kuchawedzera kusimba. Uchatanga kuva nechido chekuudza vamwe zvauri kudzidza. (Jeremiya 20:9; 2 VaKorinde 4:13) Asi unofanira kuudza ani?
Kutenda kunofanira kukubatsira kuti uudze vamwe zvauri kudzidza
9, 10. (a) Vanhu vapi vaungatanga kuudza zvinhu zvawakadzidza? (b) Ungazvifambisa sei kana uchida kuparidza neungano?
9 Unogona kuva nechido chekutaura zvauri kudzidza kuvanhu vemumhuri mako, shamwari, vavakidzani, kana kuti vaunoshanda navo. Izvozvo zvakanaka, asi unofanira kutaura navo zvakanaka uye zvinoratidza rudo. Nekufamba kwenguva unenge wava kukwanisa kuparidza neungano. Paunenge wava kuda kuparidza neungano, unogona kuudza Chapupu chiri kudzidza newe Bhaibheri kuti ndizvo zvawava kuda. Kana munhu ari kukudzidzisa achiona sekuti wava kukwanisa uye kuti wava kurarama zvinoenderana nezviri muBhaibheri, mese muri vaviri muchagara pasi nevakuru vaviri vemuungano.
10 Pamusangano wacho panenge pachikurukurwei? Vakuru vachataura newe kuti vaone kana wava kunzwisisa uye uchibvuma dzidziso dzinokosha dzemuBhaibheri. Vachaonawo kana uchitevedzera zvinotaurwa neBhaibheri muupenyu hwako, uye kana uchinyatsoda zvechokwadi kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Yeuka kuti vakuru vane hanya nemunhu mumwe nemumwe ari muungano, kusanganisira iwe, saka usatya kutaura navo. (Mabasa 20:28; 1 Petro 5:2, 3) Kana mapedza kutaura nevakuru, vachabva vakuudza kana uchikwanisa kutanga kuparidza neungano.
11. Nei zvichikosha kuti ugadzirise zvimwe zvinhu usati watanga kuparidza neungano?
11 Vakuru vanogona kukuudza zvimwe zvinhu zvaunofanira kugadzirisa usati watanga kuparidza neungano. Nei zvichikosha kuti ugadzirise zvinhu izvi? Nekuti patinoparidza, tinenge tichimiririra Jehovha, saka tinofanira kurarama nenzira inomukudza.—1 VaKorinde 6:9, 10; VaGaratiya 5:19-21.
PFIDZA ZVIVI ZVAKO UTENDEUKE
12. Nei vanhu vese vachifanira kupfidza zvivi zvavo?
12 Pane chimwezve chinhu chaunofanira kuita usati wabhabhatidzwa. Muapostora Petro akati: “Pfidzai zvivi zvenyu, mutendeuke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe.” (Mabasa 3:19) Kupfidza zvivi kuita sei? Kunzwa urombo pamusoro pezvawakatadza. Kana kuri kuti waiva netsika yekuita upombwe, unofanira kupfidza zvivi zvako. Uye kunyange waiedza kuita zvakanaka kweupenyu hwako hwese, unofanira kupfidza zvivi zvako nekuti tese tinotadza uye tinofanira kukumbira Mwari ruregerero.—VaRoma 3:23; 5:12.
13. ‘Kutendeuka’ kuita sei?
13 Unofanira kungogumira pakunzwa urombo pamusoro pezvawaiita here? Aiwa. Petro akati unofanirawo ‘kutendeuka.’ Izvi zvinoreva kuti unofanira kusiya mararamiro ese akaipa awaiita, wotanga kuita zvakarurama. Ngatizvifananidzei nekuti uri kuenda kune imwe nzvimbo yausati wamboenda. Wati fambei, unoona kuti watora nzira isiri iyo. Unoita sei? Unomira, wotendeuka, wonanga kwauri kuda kuenda chaiko. Zvakafananawo nekudzidza kwauri kuita Bhaibheri. Unogona kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvawaiita muupenyu hwako zvawava kufanira kuchinja. Usazeza ‘kutendeuka,’ kureva kusiya mararamiro akaipa, wotanga kuita zvakanaka.
TSAURIRA UPENYU HWAKO KUNA MWARI
Wakavimbisa Jehovha kuti uchamushumira here?
14. Unozvitsaurira sei kuna Mwari?
14 Rimwe danho rinokosha raunofanira kutora usati wabhabhatidzwa nderekutsaurira upenyu hwako kuna Jehovha. Unozvitsaurira kuna Jehovha kuburikidza nekunyengetera kuna Jehovha uchivimbisa kuti uchanamata iye chete uye kuti uchaita kuti kuda kwake kuve chinhu chinokosha kupfuura zvese muupenyu hwako.—Dheuteronomi 6:15.
15, 16. Chii chinoita kuti munhu azozvitsaurira kuna Mwari?
15 Kuvimbisa kushumira Jehovha chete kwakafanana nekuvimbisa munhu waunoda kuti uchada kugara naye kweupenyu hwako hwese. Ngatitii pane mukomana nemusikana vari kudanana. Mukomana paanowedzera kuziva nezvemusikana wake, anowedzerawo kumuda uye anenge ava kuda kumuroora. Kunyange zvazvo riri danho risiri rekutamba naro, mukomana anosarudza kumuroora nekuti anomuda.
16 Paunoramba uchidzidza nezvaJehovha, unotanga kumuda uye unoda kuita zvese zvaunogona kuti umushumire. Izvi zvichaita kuti unyengetere kwaari uchivimbisa kumushumira. Bhaibheri rinoti munhu wese anoda kutevera Jesu anofanira ‘kuzviramba.’ (Mako 8:34) Zvinorevei izvozvo? Zvinoreva kuti kuteerera Jehovha ndicho chinhu chaunoisa pekutanga muupenyu hwako. Zvinodiwa naJehovha ndizvo zvinokosha kupfuura zvaunoda iwewe kana kuti zvinangwa zvako.—Verenga 1 Petro 4:2.
USATYA KUTI UNOZOKUNDIKANA
17. Nei vamwe vanhu vasingazvitsauriri kuna Jehovha?
17 Vamwe vanhu havazvitsauriri kuna Jehovha nekuti vanenge vachitya kuti vanozotadza kuzadzisa zvavakavimbisa. Havadi kugumbura Jehovha, kana kuti vanogona kufunga kuti kana vakasazvitsaurira kwaari, Jehovha haazovatongi pane zvavanoita.
18. Chii chichakubatsira kuti usatya kuti unozokundikana worwadzisa Jehovha?
18 Kuda Jehovha kuchakubatsira kuti usatya kuti unozokundikana womurwadzisa. Uchaedza kuita zvese zvaunogona kuti uzadzise zvawakamuvimbisa nekuti unomuda. (Muparidzi 5:4; VaKorose 1:10) Hauzofungi kuti zvakaoma kuita kuda kwaJehovha. Muapostora Johani akanyora kuti: “Kuda Mwari kunooneka nekuchengeta mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.”—1 Johani 5:3.
19. Nei usingafaniri kutya kuzvitsaurira kuna Jehovha?
19 Hazvirevi kuti unofanira kuva munhu asina kana kaanombokanganisa kuti uzvitsaurire kuna Jehovha. Haatarisiri kuti tiite zvatisingagoni kuita. (Pisarema 103:14) Achakubatsira kuti uite zvakarurama. (Isaya 41:10) Vimba naJehovha nemwoyo wako wese, uye “iye acharuramisa makwara ako.”—Zvirevo 3:5, 6.
KUZIVISA PACHENA KUTI UWANE RUPONESO
20. Kana wazvitsaurira kuna Mwari, nderipi danho rinotevera?
20 Unofunga kuti wagadzirira here kuzvitsaurira kuna Jehovha? Kana wazvitsaurira kuna Jehovha, unenge wagadzirira kutora danho rinotevera. Unofanira kubhabhatidzwa.
21, 22. Ungazivisa sei pachena kutenda kwako?
21 Udza murongi mudare revakuru vemuungano yenyu kuti wakazvitsaurira kuna Jehovha uye kuti wava kuda kubhabhatidzwa. Achabva aita kuti vamwe vakuru vakurukure newe dzidziso dzinokosha dzeBhaibheri. Kana vakaona kuti wagadzirira kubhabhatidzwa, vachakuudza kuti unogona kubhabhatidzwa pagungano reZvapupu zvaJehovha rinotevera. Pagungano pacho pachapiwa hurukuro ichatsanangura zvinorehwa nerubhabhatidzo. Mukurukuri wacho achabva abvunza vacho vagadzirira kubhabhatidzwa mibvunzo miviri iri nyore. Paunopindura mibvunzo iyoyo unenge ‘uchizivisa pachena’ kutenda kwako.—VaRoma 10:10.
22 Uchabva wabhabhatidzwa. Uchanyudzwa muviri wese mumvura. Kubhabhatidzwa kwauchaitwa kucharatidza munhu wese kuti wakazvitsaurira kuna Jehovha uye kuti wava mumwe weZvapupu zvaJehovha.
ZVINOREHWA NERUBHABHATIDZO RWAKO
23. Zvinorevei kubhabhatidzwa “muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene”?
23 Jesu akataura kuti vadzidzi vake vanofanira kubhabhatidzwa “muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene.” (Verenga Mateu 28:19.) Zvinorevei izvozvo? Zvinoreva kuti uri kubvuma nzvimbo yaJehovha yakakwirira uye basa raJesu muchinangwa chaMwari uye kuti Mwari anoshandisa sei mweya mutsvene wake kuti kuda kwake kuitwe.—Pisarema 83:18; Mateu 28:18; VaGaratiya 5:22, 23; 2 Petro 1:21.
Paunobhabhatidzwa, unenge uchiratidza pachena kuti unoda kuita kuda kwaMwari
24, 25. (a) Kubhabhatidzwa kunomiririrei? (b) Tichakurukurei muchitsauko chekupedzisira?
24 Kubhabhatidzwa kunomiririra chimwe chinhu chinokosha chaizvo. Paunonyudzwa mumvura, zvinoreva kuti wafa kumararamiro awaimboita kana kuti wasiyana nawo. Paunobuda mumvura, unenge wava kutanga upenyu hutsva uchiita kuda kwaMwari. Unenge uchiratidza kuti uchashumira Jehovha kubva zvino zvichienda mberi. Yeuka kuti hauna kuzvitsaurira kune mumwe munhu kana sangano kana basa. Wazvitsaurira kuna Jehovha.
25 Kuzvitsaurira kuchakubatsira kuti uwedzere kuva neushamwari hwepedyo naMwari. (Pisarema 25:14) Izvi hazvirevi kuti munhu achabva aponeswa nekungoti chete abhabhatidzwa. Muapostora Pauro akanyora kuti: “Rambai muchishandira kuponeswa kwenyu nekutya nekudedera.” (VaFiripi 2:12) Kubhabhatidzwa anongova mavambo. Asi ungaitei kuti urambe uri pedyo naJehovha? Chitsauko chekupedzisira chebhuku rino chichapindura mubvunzo iwoyo.
DZIDZISO 1: NDINOFANIRA KUBHABHATIDZWA HERE?
“Onai pano pane mvura! Chii chinganditadzisa kubhabhatidzwa?”—Mabasa 8:36
Nei uchifanira kubhabhatidzwa uye unofanira kubhabhatidzwa sei?
Kubhabhatidzwa kunoratidza kuti wakasiya mararamiro awaiita uye watanga upenyu hutsva hwekuita kuda kwaMwari.
Unofanira kubhabhatidzwa kuti ushumire Jehovha.
Kubhabhatidzwa kunoita kuti vamwe vazive kuti unoda kushumira Mwari.
Unofanira kunyudzwa muviri wese mumvura sezvakaitwa Jesu.
DZIDZISO 2: JEHOVHA HAATARISIRI KUTI UITE ZVAUSINGAKWANISI
“Kuda Mwari kunooneka nekuchengeta mirayiro yake; uye mirayiro yake hairemi.”—1 Johani 5:3
Nei usingafaniri kutya kuzvitsaurira kuna Jehovha?
Pisarema 103:14; Isaya 41:10
Hazvirevi kuti unofanira kuva munhu asina kana kaanombokanganisa kuti uzvitsaurire kuna Jehovha. Achakubatsira kuti uite zvakarurama.
Kuda Jehovha kuchakubatsira kuti usatye kuzokundikana.
DZIDZISO 3: MATANHO EKUTORA KUTI UZOBHABHATIDZWA
“Ndinofarira kuita kuda kwenyu, haiwa Mwari wangu, uye mutemo wenyu uri mukatikati mangu.”—Pisarema 40:8
Chii chaunofanira kuita kuti uzozvitsaurira kuna Jehovha?
DZIDZA SHOKO RAMWARI Svika pakuziva Jehovha naJesu Kristu. Ukaramba uchidzidza nezvavo, unowedzera kuvada.
SIMBISA KUTENDA KWAKO Nyatsovimba nezvakavimbiswa naMwari uye simba rechibayiro chaJesu icho chinotiponesa pachivi nerufu.
PFIDZA ZVIVI Izvi zvinoreva kuti unofanira kunzwa urombo pamusoro pezvakaipa zvese zvawakaita.
TENDEUKA Izvi zvinoreva kurega zvese zvakaipa wotanga kuita zvakarurama.
TSAURIRA UPENYU HWAKO Unotsaurira upenyu hwako kuna Jehovha kuburikidza nekunyengetera kwaari uchimuvimbisa kuti uchamunamata uye kuti uchaita kuti kuda kwake kuve chinhu chinokosha kupfuura zvese muupenyu hwako.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndinofanira Kuzvitsaurira Kuna Mwari Ndobhabhatidzwa Here?
bhs chits. 18 pp. 185-196
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Bhaibheri Rinotidzidzisei?